Just beddelaan iPhone in ay Sony Xperia, laakiin xiriirada ayaa weli ku saabsan jir iPhone. Tahay in aad si cad in xiriir on iPhone waxaa inta badan badbaadiyey on xasuusta telefoonka. Sidaas darteed, in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Sony Xperia, waxaad leedahay laba xal. Mid ka mid ah waxaa ku daray xiriirada aad Sony Xperia mid mid gacanta, taasi oo ah shaqo weyn, gaar ahaan marka aad leedahay boqolaal xiriiro. Habka kale waa in la helo caawinaad ka ah qalab-saddexaad.
Taas bedelkeeda, waa macquul in la isticmaalo qalab dhinac saddexaad. Halkan yimaado qalab xirfad kala iibsiga phone magacaabay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Iyadoo 1 click, dhammaan xiriirada aad iPhone waxaa loo wareejin doonaa Sony Xperia. Waxaase yaab leh, qalab xataa aad ku xoojiya sidii ay u gudbiyaan xiriirada aad iCloud, Exchange, Hotmail in Sony Xperia ah, phone Ahaado, ilaa iyo inta aad saxiixdo in xisaab adiga ku iPhone hor kala iibsiga.
Download qalab this on your computer. Hadda, 'isku day version Window ah. Haddii aad tahay dadka isticmaala Mac, fadlan qaado tallaabooyinka la mid ah.
Wondershare MobileTrans --Guji 1 iPhone in Transfer Sony
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Sony Xperia
Fiiri tallaabooyinka fudud ee hoose in ay bartaan sida ay u guuraan xiriirada iPhone in Sony Xperia.
First of dhan, rakibi iyo bilowno phone qalab kala iibsiga kombiyuutarka. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala muhiimsan ee shaashadda kombuyuutarka aad. Guji Start .
Software waxaa ay ku fiican la iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS in ay maamulaan macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 2. Isku ee iPhone iyo Sony Xperia in kombiyuutarka
Connect aad iPhone iyo Sony Xperia in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya fiilooyinka USB ah. Tani qalab kala iibsiga phone si degdeg ah lagu ogaan doonaa hindiseen, oo markaas aan u muujiyo in uu furmo suuqa ugu weyn. Sida aad ka arki, si aad iPhone bandhigo bidixda, iyo Sony Xperail on xaq.
Ugu geeska hoose ee midig, sax xogta oo cad ka hor inta nuqul . Waxay kaa caawin doona inaad ka saarto dhammaan xiriirrada hadda ku Sony Xperia si loo badbaadiyo xiriirada ka iPhone. Haddii aad inuusan dooneynin inuu sameeyo, kaliya macluumaadka Clear nuqul ka hor laga qaban.
Fiiro gaar ah: Haddii aad jeceshahay si ay u gudbiyaan xogta, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, xiriirada, videos, muusig iyo sawiro dhihi ka Sony Xperia si iPhone, waxaad riixi kartaa Flip in la beddelo meelahooda. Markaas, sameeya sidii aan hoos ku sheegi.
Tallaabada 3. iPhone Transfer xiriirada si Sony Xperia
Sida iska cad, aad wareejin karaan xiriirada, jadwalka taariikhda, SMS, music, sawiro iyo videos ka iPhone in Sony Xperia. Just sii xiriir la hubiyaa. Markaas, riix Start Copy . Window A booda, oo aad ka eegi kartaa habka xiriir kala iibsiga. Marka dhan xiriirada waxaa lagu soo guuriyeen in Sony Xperia, waa in aad riix OK dhammayn kala iibsiga.
Download MobileTrans in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Sony Xperia.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad si ay u maareeyaan xiriirada, sms, barnaamijyadooda, sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ku saabsan Sony Xperia, fadlan ka Wondershare MobileGo for Android . Waa lagu Tababaraha Android si sahlan loo isticmaalo si aad u maareyso wax kasta oo aad Sony Xperia.
> Resource > Android > Transfer Xiriirada ka iPhone in Sony Xperia